Manakara: potiky ny rambondanitra mahery vaika ny vokatra letisia | NewsMada
Manakara: potiky ny rambondanitra mahery vaika ny vokatra letisia
Ny herinandro lasa teo, nanapotika tanteraka ny fambolena maro ao anatin’ny distrikan’i Manakara ny rambondanitra mahery vaika. Voadona mafy tamin’izany ny kaominina Nosiala sy Tatao.
Tao anatin’ny 40 mn monja, potika hatrany amin’ny 90 % ny vokatry ny fambolena maro ao anatin’ny distrikan’i Manakara, vokatry ny fandalovan’ny rambondanitra mahery vaika. Tsy misy antenaina intsony, ohatra, ny letisia, vokatr’izay andro ratsy izay, nefa hisokatra amin’ity volana novambra ity ny fotoam-piotazana. Tsy ny letisia ihany fa ny lavanila, ny akondro, ny vary hatramin’ny trano fonenan’ireo tantsaha, sekoly, hopitaly CSB, fiangonana…
Any amin’ny kaominina Nosiala sy Tatao no tena niharan’io andro ratsy io fa tao koa ireo kaominina manodidina hafa. Nitondra ny fitarainan’ireo mponina any amin’io distrika io ny solombavambahoaka, Andriantsizehena Benjamin Urbain, ho an’ny governemanta sy ny BNGRC. Hatramin’izao anefa, raha ny vaovao avy any an-toerana, tsy mbola misy fanampiana tonga any amin’ireo tantsaha niharan-doza. Variana amin’ny fifidianana aloha ry zareo.
Fatiantoka toekarena goavana ho an’ny faritra Vatovavy Fitovinany iny fandalovan’ny andro ratsy iny. Taona maromaro izay, efa tsy tafavoaka ny vokatra letisia ao Manakara na ho an’ny tsena eto an-toerana fotsiny aza, noho ny faharatsian-dalana sy ny fahalafosan’ny saran-dalana. Vitsy, noho izany, ireo mpanangom-bokatra tonga any an-toerana mandray ireo vokatra ireo. Ny taona 2017, nihena 50 % ny famandrihana voarain’ny mpamboly.
Amin’ity taom-pamokarana ity, noho ny fifampiraharahana samihafa, misy ihany ireo mpandraharaha vonona handray ny vokatra ao amin’ny distrikan’i Manakara, saingy izao tra-pahavoazana izao indray !
Tombanana ho 41 % amin’ny vokatra letisia rehetra misy any amin’ny ilany atsinanan’ny Nosy ny avy ao Manakara. Ireo vondrona mpandraharaha amin’ity vokatra ity (Gel), manondrana eo anelanelan’ny 16 000 t sy 20 000 t isan-taona.